uBlock, नि: शुल्क र सुपर प्रकाश विकल्प एडबॉक प्लस | लिनक्सबाट
अलेक्ज्याण्डर (उर्फ KZKG ^ Gaara) | | aPLICACIONES, सिफारिश गरिएको
1 युबलक के हो?
2 UBlock प्रदर्शन
3 UBlock स्थापना
युबलक के हो?
uBlock यो केवल विज्ञापन अवरोधक मात्र होइन; यो एक सामान्य उद्देश्य अवरोधक हो। यसले विज्ञापन रोक्दछ किनकि यसले एडब्लक प्लस फिल्टर सिन्ट्याक्सलाई समर्थन गर्दछ, तर सिन्ट्याक्स विस्तार गर्दछ र अनुकूलित फिल्टरहरू र नियमहरूको साथ काम गर्नको लागि डिजाइन गरिएको हो। यसका सिर्जनाकर्ताहरूका अनुसार यसले एकदम हल्का सीपीयू र मेमोरी फूटप्रिन्ट छोड्छ र यसको बाबजुद यसले अन्य लोकप्रिय ब्लकरहरूद्वारा प्रयोग गरिएका हजारौं फिल्टरहरू लोड गर्न र लागू गर्न सक्दछ, जस्तै एडब्लक प्लस (एबीपी) वा घोस्टरी। यी सूचीहरूमा EasyList, EasyPrivacy, मालवेयर डोमेनहरू, र अन्य समावेश छन् जसले तपाईंलाई ट्र्याकरहरू, सामाजिक विजेटहरू, र अधिकमा ब्लक गर्न अनुमति दिन्छ। यसले होस्ट फाईलहरूको लागि समर्थन पनि ल्याउँदछ र तपाईंलाई अन्य स्रोतहरू थप्न अनुमति दिन्छ, "कारखानाबाट" आएका मानिसहरूलाई थप।
uBlock दुबै क्रोमियम / क्रोम र फायरफक्समा काम गर्दछ र, घोस्टरी विपरीत, यो प्रयोग गरेर वितरित गरिएको छ GPLv3 इजाजतपत्र, यसको लागि एक उपकरण बनाउँदै फ्री सफ्टवेयर। जबकि घोस्टरी धेरै कुशल छ, न केवल यो नि: शुल्क सफ्टवेयर हो तर त्यहाँ छन् गम्भीर शंका कि "GhostRank" प्रकार्य मार्फत यसले अवरुद्ध विज्ञापनहरूको डाटा विज्ञापन विज्ञापन कम्पनीहरूलाई बिक्री गर्दछ। यसको सट्टामा, म सिफारिश गर्दछु कि तपाईं अन्य निःशुल्क विकल्पहरू प्रयोग गर्नुहोस्, जस्तै विच्छेद गर्नुहोस् o uBlock। दिमागमा राख्नको लागि अर्को विन्दु भनेको uBlock - जस्तै एबीपी, AdGuard, र केहि अन्य- प्रयोगकर्ताहरूलाई आफ्नै फिल्टरहरू प्रविष्ट गर्न अनुमति दिन्छ, यस्तो कुरा जुन घोस्टरी वा डिस्कनेक्टसँग सम्भव छैन।
मेरो अनुभवमा, uBlock प्रयोग गरेदेखि, ब्राउजिows गतिले साँच्चै उल्लेखनीय छलांग लियो। साथै, वेब पृष्ठहरू "क्लीनर" देखिन्छ र यति धेरै अनावश्यक सामग्री बिना मेरो ध्यान विचलित गर्दछ। मानौं कि यो पर्याप्त थिएन, Ad block Plus (ABP) को विपरीत, uBlock ले कम थोरै स्रोतहरू प्रयोग गर्दछ। यहाँ प्रमाणित गर्न केहि तुलना चार्टहरु छन्।
क्रोमियममा मेमोरी खपतको तुलनात्मक विश्लेषण
फायरफक्समा मेमोरी खपतको तुलनात्मक विश्लेषण
केवल किनकि यूब्लाक फुर्तिलो र कुशल छ यसको मतलब यो होइन कम रोक्नुहोस् ट्र्याकरहरू।
मेरो विचारमा, यो पोइन्टलाई एक संक्षिप्त चेतावनी आवश्यक छ। uBlock डिफल्ट रूप मा फेसबुक, ट्विटर, Google+, आदि को केहि विजेटहरु ब्लक गर्दैन। त्यो अन्य विस्तारहरू ब्लक गर्छन्। यसका लागि, केहि तेस्रो पार्टी फिल्टरहरू सक्रिय गर्न आवश्यक छ (जुन पहिले नै यूब्लाकमा उपलब्ध छन्), जस्तै एन्टी-थर्डपार्टी सोसियल वा फ्यानबॉयको सामाजिक ब्लकिंग सूची। संक्षिप्तमा, तपाइँले खोज्नु भएको सन्तुलन नभएसम्म सूचीहरूको वरिपरि खेल्नुपर्नेछ। अर्को विकल्प, अलि बढी जटिल, उन्नत विकल्पहरू सक्षम गर्न र सेट गर्नु हो गतिशील फिल्टर नियमहरू.
स्थापना धेरै सरल छ, तपाईंले भर्खरै तपाईंले प्रयोग गर्नु भएको वेब ब्राउजरसँग सम्बन्धित विस्तार स्थापना गर्नुपर्नेछ।
फायरफक्सको लागि uBlock विस्तार डाउनलोड गर्नुहोस्
क्रोमियम / क्रोमको लागि uBlock विस्तार डाउनलोड गर्नुहोस्
लेखको पूर्ण मार्ग: लिनक्सबाट » aPLICACIONES » uBlock, सित्तैमा र सुपर हल्का वैकल्पिक एडबॉक प्लस
धेरै धेरै धन्यबाद, म यो प्रयास गर्नेछु। मेरो फायरफक्स एकदम धेरै ढिलो भइरहेको छ।
मैले फायरफक्समा यसको आउटपुटको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छु, यसले लगभग केहि पनि खान्दैन र राम्रोसँग काम गर्दछ।
उसले बनाएको काँटामा तपाईं मूल लेखकको विकास अनुसरण गर्न सक्नुहुन्छ:
uBlock उत्पत्ति, फायरफक्समा विस्तार: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/ublock-origin/
तपाईं फाँटको बारेमा अधिक जानकारी फेला पार्न सक्नुहुनेछ, दुबै विस्तारहरूको समीक्षा र विकिपेडियामा:
RawBasic लाई जवाफ दिनुहोस्
यो पहिले नै राम्रो हुनेछ, तर प्रदर्शन कसरी होस्टि र / आदित / होस्ट सम्पादन तुलना हुनेछ? यो स्क्रिप्ट राम्रो छ, यद्यपि यसले विज्ञापन iframes लाई हटाउँदैन, causing०404 त्रुटि चिन्ह लगाईएको कारण।
@ जोर्जजिकियो मैले तपाईले भनेको जस्तै एक समाधान प्रयोग गरें, आईफ्रेमहरू र पृष्ठमा अवरुद्ध विज्ञापनको कुनै अन्य ट्रेसहरू हटाउनको लागि यूजर कन्टेन्ट सीएसएसको साथ एक परिमार्जित / आदि / होस्टहरू। निश्चित रूपमा यस्ता चीजहरू गर्दा फायरफक्सको प्रदर्शनमा ठूलो सुधार हुन्छ। यहाँबाटLLux मा अर्को धेरै राम्रो विकल्प प्रकाशित गर्नुहोस्, जस्तो थियो https://blog.desdelinux.net/privoxy-adblock-list-y-adios-publicidad/ र यसले देखाउँदछ कि फायरफक्सको प्रदर्शन त्यो कन्फिगरेसन अन्तर्गत कति सुधारिएको छ, यूजर कन्टेन्ट सीएसएस र / आदि / होस्टहरूको नजिकको।
तर म तपाईलाई यकिनताका साथ भन्न सक्छु कि युबलोक एकदम राम्रो छ, मसँग हाल फायरफक्समा २१ ट्याबहरू खुला छ, तीन कन्सोलहरू, भिम र गेनी खुला र consumption 21१ मेगाबाइट रामको खपत, वास्तवमा खराब होइन।
मैले त्यो प्रबन्ध गर्न सकें र यसको मूल्यांकन गरियो। आशा छ कि यो ओपेरा like जस्तै अन्य ब्राउजरहरूको लागि उपलब्ध छ
अहिलेको लागि, म कसरी अब्लोकमा टाँसिन्छु हेर्नुहोस् 😀
म आफैलाई जवाफ दिन्छु: हो त्यहाँ XD अवस्थित छ
थोरै ज्ञात तर शक्तिशाली विकल्पबाट, उत्कृष्ट योगदान @usemoslinux। धेरै समय भयो जबदेखि मैले एबीपीलाई स्क्रिप्टको पक्षमा प्रयोग गर्न छाडिदियो / आदि / होस्टहरू धेरै राम्रो सूचिहरूको शृंखला प्रयोग गरेर, एक संशोधित यूजर कन्टेन्ट सीएसएस कष्टप्रद श्वेतस्थल हटाउनका लागि। यसले निश्चित विज्ञापनहरू लीक गर्दछ, तर फायरफक्सको प्रदर्शनमा भएको सुधार आश्चर्यजनक थियो।
तब मैले यो विस्तारलाई / आदि / होस्टहरूको लागि स्क्रिप्ट सुधार गर्ने क्रममा पत्ता लगाएँ, मैले यसलाई प्रयास गर्ने निर्णय गरें र मैले भन्नै पर्छ कि म खुशीसाथ छक्क परेको छु, यसले प्रयोगकर्ता कन्टेन्ट.कसको रूपमा प्रदर्शनको समान स्तर कायम गर्दछ र विज्ञापन अवरोध धेरै सुधार गर्दछ, साथै श्वेतसूचीमा परिमार्जन गर्न सजिलो भएको वा नयाँ तत्वहरू थप्नुहोस्, उत्कृष्ट उत्कृष्ट।
यो स्पष्ट पार्नुपर्दछ कि त्यहाँ दुई "uBlock" छन्। एउटा नोटमा उनीहरूले लि in्क प्रस्ताव गरे जुन उही हो जुन म प्रयोग गर्दछु, "मूल" जुन अर्को विकासकर्तालाई हस्तान्तरण गरे पछि उनको प्रोजेक्टमा मूल विकासकर्ताको निरन्तरता हो, जसको मुख्य शाखालाई सम्भार गर्ने जिम्मेवारी अर्को विकासकर्तालाई हस्तान्तरण गरे पछि uBlock प्रोजेक्ट।
त्यहाँ धेरै अनौठा चीजहरू थिए, किनकि एक तर्फ मूल डेवलपरले आफ्नै प्रत्यायोजित परियोजनाको काँटा लिए र यसलाई सुधार्यो र यसलाई राम्रोसँग कायम राख्छ। अन्य विकासकर्ताहरू बिभिन्न मुद्दामा धेरै विवादमा फसे, र धेरै अवरोधकर्ताहरूसँग अलोकप्रिय भए।
संक्षेप मा, तिनीहरूले छनौट गर्दा सावधान रहनुहोस्। नोटमा सिफारिस गरे अनुसार यूबलक ओरिजिन उनीहरूले प्रयोग गर्नु पर्छ। काँटा बाहिर आउँदा र कुनै समस्या बिना म लगभग प्रयोग गर्दछु।
थप रूपमा, म घोस्टरीले मलाई दिने ट्र्याकि and र ट्र्याकिंगबाट बच्न प्राइभेसी ब्याजरको प्रयोग गर्दछु, जुन नोटमा उल्लेख गरिएको उही कारणहरूले गर्दा मैले प्रयोग गर्न बन्द गरें।
क्रोममा नोटमा मूल हो, तर फायरफक्स अन्य xD हो
त्यो फायरफक्सको लागि मूल हो।
सुधार गरियो! 🙂
Usemoslinux लाई जवाफ दिनुहोस्
स्पष्टीकरण को लागी धन्यवाद। मैले अर्को टिप्पणीमा भनेझैँ, लेख लेख्ने क्रममा मलाई अलग परियोजनाहरूको रूपमा उब्लोक र यूलोक मूलको अस्तित्वको बारेमा थाहा थिएन। जे भए पनि, अब यस लेखका सबै लि the्कहरूले यू-बल्क मूल विस्तारहरूतर्फ औंल्याउँछन्, जुन हाल मूल लेखक द्वारा समर्थित छ।
मेरो अंशका लागि विज्ञापनले खास फरक पार्दैन, तर ट्र्याकि meले मलाई परेशान गर्दछ। के तपाइँ बिच्छेदनको साथ संयोजनको रूपमा प्राइभेसी ब्याजर प्रयोग गर्न सल्लाह दिनुहुन्छ? वा अरू केहि?
नमस्ते, म प्राइभेसी ब्याजर प्रयोग गर्दछु र मलाई ट्र्याकिंग रोक्नको लागि कार्य गर्ने तरिका मनपर्दछ।
जस्तो भनिएको छ, घोस्टरी खुला स्रोत होइन र त्यहाँ धेरै शंकाहरू छन् कि यसले कम्पनीहरूलाई डाटा पठाउने बेलामा रोकिन्छ।
विच्छेदनको मामलामा, मैले यसलाई केहि समयको लागि प्रयोग गरें र यसले घोस्टरीको जस्तो काम गरें। तपाईंसँग ट्र्याकरहरूको सूची छ जुन यसलाई रोक्दछ र यसले अपडेट रहन्छ। म निश्चित छैन कि यो ओपन सोर्स हो कि होइन, तर मैले यसलाई प्रयोग गर्न छाडें किनभने यसले मलाई विश्वास गर्दैन र घोष्ट्रीले राम्रोसँग काम गर्यो।
अब, किनकि म केहि खुला स्रोत चाहान्थें, मैले खोजेर प्राइभेसी ब्याजर फेला पारे। मँ स्पष्ट पार्छु कि यसले अघिल्लो २ भन्दा फरक तरीकाले काम गर्दछ। पूर्वनिर्धारित रूपमा यो ब्लक हुँदैन तर यो तपाईं यसलाई प्रयोग रूपमा जान्छ र नेविगेट जो ट्र्याकरहरू ब्लक गर्न वा नगर्ने हो।
यदि तपाइँ प्रयोग गर्नमा अधिक रुचि राख्नु हुन्छ (सुरक्षा कारणका लागि कि ती पछाडि डबल खेल्दैनन्) सबै खुला स्रोत, प्राइभेसी ब्याजर उत्तम विकल्पहरू मध्ये एक हुनुपर्दछ। र यो एक्लो प्रयोग गर्नुहोस्, साथै डिस्कनेक्ट र घोस्टरीले समान गर्नुहोस्।
सधैं कार्यात्मक पोष्टको साथ, धन्यवाद पाब्लो।
यसले फायरफक्समा मेरो प्रदर्शनमा दुई पटक सुधार गरेको छ।
यस बाहेक, winXP मा र लिनक्स मा होस्ट फाईल धेरै समान छ, लगभग उस्तै
तपाईंको यहाँ अपडेट गरिएको छ। http://winhelp2002.mvps.org/hosts.htm
विन्डोज र लिनक्स को लागी निर्देशन संग, ती आवश्यक छैन तर ताकि कुनै श doubts्का छैन।
पाउलो जुनिगा भन्यो
सुचनाकाे लागी धन्यबाद। मैले भर्खर एडब्लकलाई डिफिल्ट गरें र अब मसँग यो आश्चर्य छ। यसले सफारीमा १००% काम गर्दछ।
पाउलो ज़ाइगालाई जवाफ दिनुहोस्
वाह, यो एड-अन सिफारिसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।
मेरा कम्प्युटरहरूमा मैले एबीई प्रयोग गरिरहेको थिएँ, तर जब फायरफक्स देवको बहु-प्रक्रिया विकल्प आयो, यसले काम गर्न छाड्यो त्यसैले मैले बहु-प्रक्रिया प्रयोग गर्न रोक्न रुचाएँ ... तर यो राम्रोसँग देखिन्छ ... 🙂
मैले लामो समयदेखि एडब्लक प्लस प्रयोग गरिरहेको थिएँ।
मैले uBlock मूल स्थापना गरेको छु र यसले थोरै सुधार गरेको देखिन्छ, विशेष गरी मेरो ल्यापटपमा, जुन पहिले नै एक उमेर हो। खाना पछिको टेबलमा मैले धेरै ध्यान दिएन।
मँ के गर्दै छु यस्तै यस्तै नामहरूको साथ गडबड कोहि चीज हो uBlock, uBlock मूल, lockबल्क ...
मैले युबॉक मूल उत्पत्ति राखेको छु, तर सत्य यो हो कि मलाई कुन स्थापना गर्नु राम्रो हो भनेर केही पनि थाहा थिएन।
मैले टिप्पणीहरूमा पढेको छु कि सर्जियो एसले यूलोक उत्पत्तिलाई सिफारिश गर्दछ, तर मैले ती साइटहरू पनि पढेको छु जहाँ उनीहरूले सिफारिस गर्छन् - ब्लाक र युबलाक, एक चीजको बारेमा भ्रामक सन्दर्भ सहित र अर्कोमा लिंकहरू राखे पनि, वास्तवमा यो समान पोष्टले तपाइँलाई लि links्क गर्दछ। फायरफक्समा uBlock र क्रोम को लागी uBlock मूल।
गडबडी बताउनुको अलावा, मलाई यो थाहा छैन कि यस्तै प्रकारको यस्तै किसिमको नाम के हुन्छ, तर यदि कसैले थोरै अर्डर गर्न र यसलाई अलि स्पष्ट पार्न सक्ने भए म यसको मूल्यांकन गर्छु।
धन्यवाद, जे भए पनि।
सत्य यो हो कि यो लेख लेख्ने क्रममा, म युवॉक र युबलक मूलको अस्तित्वका बारे मलाई थाँहा थिएँ। जे भए पनि, सुसंगत हुनको लागि, मैले लिंकहरू सुधार गरें ताकि ती सबैले यूब्लक मूलमा औंल्याए।
यो धेरै राम्रो देखिन्छ, मेरो मामलामा मलाई यति धेरै प्रकार्यहरू आवश्यक पर्दैन र म ब्लूहिल प्रयोग गर्दछु र यो मेरो लागि उत्कृष्ट कार्य गर्दछ।
किनकि मैले देखेको छु कि फायरफक्समा u block उपलब्ध छ, म यसलाई प्रयोग गर्ने छु। यो जान्नु राम्रो समाचार हो। वैसे म एबीईलाई उडानमा पठाउँछु किनकि यसले मलाई कष्टकर व्यवहार दिइरहेको छ किनकि यसले मेरो अनुमतिबिना केहि चीजहरू स्थापना गर्दछ, खासगरि मेरो प्रेमिकाको ल्यापटपमा। र मैले यो स्थापित गरें कि यो तपाईको भन्दा राम्रो थियो
ठीक छ, नोट को लागी धन्यवाद। मलाई यो मनपर्‍यो
जेम्स_ चे भन्यो
उत्तम कन्फिगरेसनको व्याख्या गर्ने पोष्ट राम्रो हुनेछ, त्यसैले विस्तारमा सबै कार्यक्षमता अडब्लक, र घोस्टरी हुन्छ। थप रूपमा, म यो सोध्न चाहान्छु कि यदि कसैलाई डोनट्र्याकमे अब ब्लर भनेर चिनिन्छ र यदि तपाईं यो कसरी भरपर्दो छ भने कसरी सोच्नुहुन्छ?
James_Che लाई जवाफ दिनुहोस्
मैले एउटा कम्प्युटरमा Adbloc को सट्टामा यो प्रयास गर्नुपर्नेछ जुन मेरो Xubuntu सँग केवल १ Mb मेमोरीको साथ छ। म फायरफक्स प्रयोग गर्दछु र कहिलेकाँही यो एकदम ढिलो र लगभग क्र्यास हुन्छ किनकि आजकल केही वेब पृष्ठहरूले यति सक्रिप्टहरू राख्दछन् कि त्यहाँ नेभिगेट गर्ने कुनै उपाय छैन।
Jvare लाई जवाफ दिनुहोस्
कति राम्रो विज्ञापन ब्रोकरहरू अवस्थित छन्, कहिलेकाँही मात्र विज्ञापन र कुनै सामग्री लोड गरिएको थिएन 🙁
TRANA को ER KUNFÚ भन्यो
यसले सबै विज्ञापनलाई अवरुद्ध गर्दैन, कम्तिमा याहू मेलमा। यदि तपाईंसँग याहू मेल छ भने, तपाईंको इनबक्स प्रविष्ट गर्नुहोस् र याद गर्नुहोस् कि पहिलो प्राप्त सन्देशको माथि मात्र त्यहाँ एक बाकस छ, जुन समय-समयमा विज्ञापन देखा पर्दछ। मैले फिल्टरहरूलाई एक हजार तरीकाले कन्फिगर गरेको छु र खुशी विज्ञापनको साथ बक्स समय समयमा देखा पर्दछ, कम्तिमा मलाई यो कसरी हटाउने थाहा छैन।
ER KUNFÚ DE TRIANA लाई जवाफ दिनुहोस्
u block chroium LMDE betsy मा ​​ठूलो काम गर्दछ
पोष्टका लागि धन्यबाद
Jabelse लाई जवाफ दिनुहोस्
धेरै राम्रो, साझेदारीको लागि धन्यवाद
फेरमा जवाफ दिनुहोस्
Nyoroxuggk लाई जवाफ दिनुहोस्
अल्फ्रेडो बोहोर्क्ज भन्यो
म तपाईलाई समस्याको बारेमा बताउँदै छु जुन खडा भएको छ। मैले हाल अवरूद्ध अवरोध उपकरणहरू प्रयोग गरेको छु एडब्लकधेरै समय देखि वरिपरि भएको र मेरो लागि यो अचम्मको कुरा हो कि समयको साथ तिनीहरू कम र कम उपयोगी हुन्छन्। तार्किक कुरा विपरित हुने थियो, कि तिनीहरू सुधार हुन्छ जब यो विज्ञापन सामग्री ब्लक गर्न को लागी आउँछ तर अधिक वेबसाइटहरू छन् जहाँ तपाईंसँग ब्लकर छ, वा तपाईं विज्ञापन खाउनुहुन्छ वा तिनीहरूले तपाईंलाई पृष्ठ पुन: लोड गर्न बाध्य पार्छन् किनकि यसलाई तपाईं पत्ता लगाउँदछ। अवरोधक म तपाईंलाई सोध्न चाहान्छु कि यदि आज तपाईंलाई विज्ञापन रोक्न कुनै प्रभावकारी उपकरणको बारे थाहा छ। धन्यवाद!
अल्फ्रेडो बोहराक्जलाई जवाफ दिनुहोस्